Ịkwanyere na WPC jikọrọ ọnụ Foamed Board Production Line - China Qingdao Xinquan Plastic
1. Atụmatụ na Uru nke ịkwanyere, WPC jikọrọ ọnụ Foamed Boards:
Ịkwanyere na ịkwanyere osisi mejupụtara jikọrọ ọnụ foamed osisi (ụlọ osisi, WPC efere) extrusion akara, na-anyị ụlọ ọrụ ọhụrụ ngwaahịa dị ka ahịa mkpa, ọ pụrụ belata na-eri, imegharị ihe ma belata mmetọ. The WPC osisi eji ịkwanyere, n'efu osisi ma ọ bụ na-akọ ugbo na osisi, CaCo3 na ndị ọzọ nwekwara dị ka isi ihe onwunwe, na mbadamba bụ ọhụrụ ngwaahịa na ike ebe nke ígwè efere na achara efere.
The ngwaahịa atụmatụ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi, corrosion-eguzogide, dee mmiri na-àmà, nla na-àmà, distortion eguzogide, na ike-esichara n'okpuru otu nhazi ọnọdụ dị ka osisi na ngwaahịa, ala na-eri, ìhè arọ, na ike egweri karịa 30 ugboro, ya mere ha nwere obosara na-ewu ewu ngwa na-eme n'ọdịnihu .. The n'efu n'ọhịa na plastic nwere ike itighachi na-emepụta WPC mbadamba, nke ọ bụghị nanị ezi na gburugburu ebe obibi, ma 'na-atụgharị egbughị n'ime akụ na ụba ".
2. ịkwanyere na WPC jikọrọ ọnụ foamed mbadamba Ngwa:
Ịkwanyere na WPC jikọrọ ọnụ foamed mbadamba na-eji ọtụtụ ebe dị ka ụlọ osisi, ngwaọrụ osisi, ngwá ụlọ, ebu maka ngọngọ, nkwakọ, imegharị ihe maka iji igbe, advertisement efere, show efere, azụmahịa efere, ụlọ, ụgbọ mmiri na profaịlụ, wdg ngwaahịa a nwere nkọwa dị ka ihu igwe na-eguzogide , na-eguzogide izizi, corrode, urukpuru, ndanda, ọkụ, a hoputara, ikpuru, ụmụ oke, ultraviolet ray, wdg nwekwara ike na-okpomọkụ, jiri ogologo ugboro.
3. Machine Akụkụ:
Nke a mmepụta akara adopts pụrụ iche e mere SJZ80 conical ejima ịghasa extruder, eji DC ọsọ regulator, dị ụwa ma ama ika okpomọkụ njikwa, nwere uru nke nnukwu ọsọ nduzi akporo, ezi okpomọkụ akara, mfe na pụrụ ịdabere na ime. The inyeaka nkeji iso nke agụụ foamed guzoro, bufee-apụ, na-egbu igwe na stacker, wdg O na-onwem na nnukwu amanye jụrụ ngwaọrụ iji hụ na ezi foamed N'ihi. Katapila ụdị osisi na-apụ adopts précised Mbelata na ugboro ole inverter, atụmatụ ezi uche Ọdịdị; nnukwu kwara ike na anụ ido anya. The ọnwụ igwe nwere àgwà nke pụrụ ịdabere ma kpọmkwem na-arụ ọrụ, ezi ọnwụ, wdg The stacker na-ekwekọghị na ibughari Trolley na pụrụ iche e mere roba nchedo ọta, nwere uru nke mmebi free iji ngwaahịa, mfe ma adaba ọrụ, wdg The inyeaka nkeji na-enwe ike iji PLC akara, nke bụ anụ na a pụrụ ịdabere.
4. Main ụzụ kwa
Product obosara mm 1220 1600 1600-2050 2050
Product ọkpụrụkpụ mm 3-20 5-30 3-20 3-20
Max. extrusion ikike n'arọ / h 350 500 600 450
Ike nke extruder KW 75 110 120 75
Rịba ama: The nkọwa bụ isiokwu ịgbanwe-enweghị tupu mara.
Previous: Ịkwanyere Ru marble / eṅomi nkume osisi Production Line
Next: PC oghere Grid Board / mpempe akwụkwọ Production Line